IGaliciaCAD, uninzi lwezixhobo zasimahla-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-GaliciaCAD, ezininzi iinkonzo zamahhala
I-GaliciaCAD, ezininzi iinkonzo zamahhala
IGaliciaCAD yindawo eqokelela inani elifanelekileyo lezinto eziluncedo zobunjineli, ubume bendawo kunye nolwakhiwo. Uninzi lwezixhobo ezikhoyo zisimahla okanye zisimahla ukuba zisetyenziswe, nangona ezinye zifuna ubulungu, ngobulungu bonyaka obungu-Euro ezingama-20 ezibandakanya iCD eneebhloko ezingama-8,000. Kwimeko yokuba ngamaqabane, ikhonkco lokukhuphela isixhobo lisoloko linikezelwa kwikhonkco elingaphandle.
Kule thumela sifingqa, umzekelo, ukuqokelela kwezixhobo ezikhoyo zokuhlola (i-13)
Topo yeSayithi Ukwenza imodeli yendawo yedijithali
Terragen Ukubonelela ngeengxaki zefotorealistic
Grid2CAD Ukuguqula imifanekiso yomhlaba wegridi kwifayile ye-dwg
DXFacil Yenza iifayile ze-dxf ukusuka kwi-txt kunye nakwezinye izinto, yenza ezinye iipirouettes
IzivumelwanoVert I-template ye-Excel ukudala izivumelwano ezihambelanayo
TopoUtil Isicelo sokuphumelela
GeoProfiles Ukuvelisa iiprofayili ezihambelanayo kwifayili ye-txt, ukwazi ukukhetha umlinganiselo wesigxina okanye obala
Cookie Cookie Isixhobo sikaLuis Miguel Tapiz Eguiluz Ukuguqula izilungiso
Izidlo Ukubala izitishi ezilandelelanayo kwi-alignment, zibandakanya imigca eqondekileyo kunye nemigangatho
Citimap Isixhobo esithile sokuqala sokwenza imephu
Sichaza ezinye ukuba sele sibhekelele kule bhulogi, njengoko HeyWhatsThat, Nasa World Wind, Ehlabathini elungileyo,
Ezinye iinkqubo zithinteka ukuba zinguqulelo ze-AutoCAD, kodwa akubanga kakubi ukugcina iso kubo.
Kukho izixhobo kwezinye iinjongo, ezifana:
Ubunjineli bokubala (54)
Izixhobo 3D (29)
Iinkonzo ezihlukeneyo (15)
Ukongezelela, iGaliciaCAD inezinye iintlobo zezibonelelo, ezifana ne:
Iincwadi kunye neencwadi
Imifanekiso kunye nezinto
Ngapha koko, ndincoma le webhusayithi ukuba ibe phakathi kweyona nto uyithandayo, ngaphandle konxibelelwano olwaphukileyo okanye iqonga eligcwele ugaxekile, umxholo wayo kufanelekile ukuba uthandwe. Bangabhalisela ukufumana iindaba ngeposi okanye ukuthenga ubulungu ngazo zonke izibonelelo ezifakiwe.
Iifashoni zolu lutsha ...
I-CD yokufunda ye-GIS, isixhobo esikhulu sokufundisa
UFlorentino Diaz Rodriguez uthi:
Ukusetyenziswa kwezi bhloko kuluncedo kakhulu
Ares, enye i-CAD ye-Linux kunye ne-Mac